यस्ता छन् विश्वका सबैभन्दा हिंसक सहर, पहिलो नम्बरमा कुन देश ? | Rajmarga
यस्ता छन् विश्वका सबैभन्दा हिंसक सहर, पहिलो नम्बरमा कुन देश ?
संसारकै सबैभन्दा सुन्दर सहर, शान्त सहर, खुसियालीपूर्ण सहर यस्ता सहरहरुको सूची जारी भइनै रहन्छ । तर हालै संसारको सबैभन्दा हिंसक सहरको सूची पनि जारी भएको छ।
यो सूचीमा सबैभन्दा बढी हिंसक सहर ल्याटिन अमेरिका हो । मेक्सिकोका नागरिक संगठन सिटिजन काउन्सिल फर पब्लिक सेफ्टी एन्ड क्रिमिनल जस्टिस (सीसीएसपीजेपी)ले हालै जारी गरेको रिपोर्टमा यस्ता ५०वटा सहर उल्लेख गरेको छ।
यो संगठनले १ लाख निवासीहरुको हत्याको आँकलन गरेर यो सूची तयार पारेको हो । यी ५० सहरमध्ये १७ ब्राजिल, १२ मेक्सिकोमा, ५ भेनेजुएलामा, ३ कोलम्बियामा र २ वटा सहर होन्डुरसमा छन् । यसका साथै एल साल्भाडोर, ग्वाटेमाला र प्युर्तो रिकोमा पनि एक एक सहर छ।
हिंसामा नम्बर एक छन् यी सहर
मेक्सिकोमा उत्तर–पश्चिमी प्रान्त बाहा क्यालिफोर्निया सूको लास काबोस सहर एउटा पर्यटकीय स्थल हो। तर, यो वर्ष यो सहरलाई संसारको सबैभन्दा हिंसक देशको सूचीमा पहिलो नम्बरमा राखिएको छ।
सीसीएसपीजेपीले तीन लाख आवादीवाला सहरमा गरिएको अध्ययनमा पायो कि हालैका समयमा यहाँ तिब्रताका साथ हिंसा बढको छ। एक वर्षमा यहाँ हिंसामा ५०० प्रतिशत वृद्धि भएको देखिएको छ।
सन् २०१६ मा यहाँ ६१ हत्या भएको थियो । यही सन् २०१७ मा यो सहरमा ३६५ हत्या भयो । मेक्सिकोमा १ लाख व्यक्तिमा हत्याको दर करिब १११ रह्यो । संसारको उल्टो यहाँ हिंसामा तिब्रताका साथ बढोत्तरी आएको छ। २०१५ मा यो सूचीमा मेक्सिको पाँचौ सहर थियो तर यसपटक १२औ सहरका रुपमा मेक्सिको छ।
यही २०१७ मा संसारका शीर्ष १० हिंसक सहरमध्ये पाँच केवल मेक्सिकोमा छ ।मेक्सिकोमा यतिधेरै हिंसा हुनुका कारण के हो ? सीसीएसपीजेपी संगठनका अनुसार मेक्सिकोसँग अपराधिक समूहविरुद्ध लड्ने कुनै रोडम्याप छैन र त्यहाँ हिंसाको सबैभन्दा खराब स्तर देखिँदै छ।
अब दोस्रो नम्बरमा आयो
भेनेजुएलाको काराकस सहर हिंसक सहरको सूचीमा पहिलो स्थानमा रहन्थ्यो, जसलाई लास काबोसले यसपटक दोस्रो स्थानमा पुराएको छ। यहाँ एक वर्षमा ३३८७ जनाको हत्या भएको छ।
एक लाख आवादीमा यहाँ हत्याको दर करिब १११ रहेको छ। सीसीएसपीजेपीका अनुसार उसलाई आधिकारिक टाडा पाउन निकै समस्या सामना गर्नु परेको थियो।
सीसीएसपीजेपीका अनुसार ४० लाख नागरिकले देश छोडिसकेका छन्, यसमध्ये आधा मात्र गत तीन वर्षमा देश छोडेर गएका हुन्।
होन्डुरसले बनायो हैरान
सबै नराम्रा खबरका बिच एउटा खुसीको खबर पनि छ । केही यस्ता सहर पनि छन् जहाँ हिंसामा निकै कमी आएको छ। मध्य अमेरिकाको सहरमा हिंसा निकै कम भएको छ।
होन्डुरसको सेन पेड्रो सुला निकै तिब्रताका साथ हिंसक सहरको सूचीमा तल आएको छ। सन् २०१६ मा यो सहर तेस्रो नम्बरमा थियो, २०१७ मा २६औं स्थामा आएको छ। एक वर्षमा यहाँ हत्याको दरमा ५४ प्रतिशतले कमी आएको छ।
एक लाख आवादीमा हत्याको दर पहिला ५१बाट केही अधिक थियो जुन अब करिब २१ भइसकेको छ। सीसीएसजेपीका अनुसार हिंसामा कमी आफै आएको होइन, होन्डुरस सरकारले अपराधिक समूहहरुविरुद्ध कडा कदम चालेको थियो । र, अपराधका लागि सजा पनि बढाएको थियो।
५० सहरको यो सूचीमा अमेरिकाको सेन्ट लुईस, दक्षिण अफ्रिकाको केपटाउनजस्ता सहर पनि छन् । बीबीसी हिन्दीबाट
Previous post: लौ आयो फेक न्युजसम्बन्धी अहिलेसम्मकै ठुलो अध्ययन, यसरी फैलन रहेछ फेक न्युज
Next post: विश्वको अनौठो रुख ! जहाँ पैसा फल्छ, थाहा पाउनुहोस् कहिल्यै नदेखेको र नसुनेको यो रुखको रोचक रहस्य